Izixhobo ze-DEVice-iTekhnoloji yaBantu yaMazwe
Itekhnoloji yaBantu abaHlabathi
BHABELA PHILIPPINES (4K UHD) 4K Ividiyo
Ihlabathi kunye nabantu, indalo, Iliso lentaka, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo., Encyclopedia, Encyclopedia
IPalawan sisiqwenga separadesi, isilayi sesiqithi esigcwele izilwanyana zasendle ezingaqhelekanga, iilali zokuloba ezithandekayo kunye neNdawo yeLifa leMveli ye-UNESCO. I-Wave kwizilwanyana ezisemngciphekweni kwiKalawit Wildlife Sanctuary okanye iphonononge inqanawa yaseJapan eCoron Island, ethathwa njengeyona ndawo intle yokuntywila.
UKUHAMBA NGAPHAKATHI KWEZIBHENO (4K UHD) (Ividiyo ye-4K ye-Ultra HD)
Ihlabathi kunye nabantu, indalo, Iliso lentaka, Encyclopedia
IMaldives, ngokusesikweni yiRiphabhlikhi yaseMaldives, yindawo encinci yeziqithi ezikumazantsi eAsia ebekwe kuLwandlekazi lwaseIndiya. Ime kumazantsi mpuma eSri Lanka naseIndiya, malunga neekhilomitha ezingama-700 (430 mi) ukusuka kwilizwe laseAsia. Ikhonkco lama-26 eetolls lisuka e-Ihavandhippolhu atoll emantla ukuya eAduu atoll emazantsi (ngaphesheya kweikhweyitha). IMaldives, ihlala kummandla ...
UKUHAMBA NGAPHAMBI KWE-SCOTLAND (4K UHD) -umculo opholileyo kubuhle bendalo obumangalisayo (ividiyo ye4K Ultra HD)
Ihlabathi kunye nabantu, Iliso lentaka, Encyclopedia, Encyclopedia
IScotland, ilizwe elinolawulo oluzimeleyo kunye nenxalenye yezopolitiko e-United Kingdom ye-Great Britain kunye ne-Northern Ireland, yintsimi yelizwe enezopolitiko, ezomzimba kunye nejografi, inkcubeko okanye imbali, enokuthi ichazwe ngokucacileyo kwaye ilungiswe, okanye ifiphele (kule meko, rhoqo, eyinxalenye ye-United Kingdom, uhlobo lukarhulumente okanye urhulumente apho intloko yelizwe ingukumkani, ...
UKUPHEPHA NGOKUQELA I-ICELAND (4K UHD) -Ukuze uphumle uMculo ngeNdalo entle (iVidiyo ye-4K ye-Ultra HD)
Ihlabathi kunye nabantu, indalo, Iliso lentaka
I-Iceland lilizwe elikwisiqithi esikumantla kuLwandlekazi lweAtlantiki elinabemi abangama-356 kunye nommandla we-991 km103 (000 sq mi), iyenza ukuba ibe lelona lizwe linabantu abaninzi eYurophu.
UKUPHEPHA NGOKWESWEDENI (4K UHD) -umculo opholileyo kubuhle bendalo obumangalisayo (ividiyo ye-4K Ultra HD)
Igama elisemthethweni laseSweden buBukumkani baseSweden (iSweden lilizwe elisenyakatho eMantla Yurophu. Imida iNorway ngasentshona nasemantla, neFinland empuma. Inxulunyaniswe neDenmark kumazantsi-ntshona ngebhulorho yetonela enqumla i-Øresund Strait.
IMexico 4K - umculo opholileyo kunye neevidiyo zendalo ezintle
UMexico udume ngamabhishi aselwandle amhlophe, indalo emangalisayo kunye nezikhumbuzo zamandulo zokwakha ezishiywe kukushicilelwa kwexesha. Kukho indawo yezinto zakudala zeAztec kwidolophu endala ekumbindi weSixeko saseMexico. Ababhenkethi banokuyithanda imisebenzi emihle yoyilo efana neTeatro Palacio de Bellas Artes, iSikhumbuzo seRevolution, iCathedral yeCawa yeMetropolitan.
BHALA PHAMBILI KWI-DOLOMITES (4K UHD) -Umculo opholileyo ngeNdalo entle (Ividiyo ye-4K ye-Ultra HD)
Ihlabathi kunye nabantu, indalo, Encyclopedia
IiDolomites, ezikwabizwa ngokuba ziiDolomites, iiDolomites okanye iiDolomites, luluhlu lweentaba ezikumantla mpuma e-Itali. Benza inxenye yeAlps yeLimestone eseMazantsi kwaye bandula ukusuka kuMlambo iAdige entshona ukuya kwiPieve di Cadore Valley empuma. Imida esemantla nakumazantsi ichazwe yiPuster Valley kunye neNtlambo yaseSuana (i-Italiya: iValsugana). IiDolomites zibekwe e ...
UKUPHEPHA NGOKUGQIBELA IDenmark (4K UHD) -umculo opholileyo ngobuhle bendalo obuqaqambileyo (ividiyo ye-4K Ultra HD)
IDenmark, ngokusemthethweni uBukumkani baseDenmark, lilizwe elisentla eMantla Yurophu. IDenmark ngokwayo, engowona mazantsi emazantsi amazwe aseScandinavia, aqukethe usingasiqithi weJutland kunye neziqithi ezingama-443 ezibizwa ngokuba ziziqithi, ezona zikhulu zazo yiZeeland, Funen kunye nesiqithi saseMantla Jutland. Iziqithi zibonakaliswe ngumhlaba ocwengileyo wokulima kunye nonxweme olunesanti, ukuphakama okuphantsi kunye nemozulu enemozulu epholileyo. IDenmark ibekwe ...
I-AUSTRIA kwi-8K ULTRA HD -Hamba eyona ndawo iphambili e-Austria ngomculo we-8K weTV ophumlayo
I-Austria lilizwe elincinci. Nangona ingenalo inani kunye neendidi zokutsala, umzekelo, e-Italiya okanye eGrisi, i-Austria ineentlebo zayo. Kodwa ungasoloko usenza uluhlu lwezona ndawo zibalaseleyo ze-10 zaseOstriya ezingafanelekanga ukuhoywa xa usiya e-Austria. Makhe sibone ukuba yintoni inani labakhenkethi: I-Schönbrunn Palace: yintloko yabakhenkethi ...
IHLABATHI LEZILWANYANA kwi-8K ye-ULTRA HD • Izilwanyana zasendle ezimangalisayo kunye nezandi zendalo ze-8K TV
Ihlabathi kunye nabantu, indalo
Kule vidiyo ye-8K ye-Ultra HD, sibonisa imeko-bume yethu, eyikhaya leentlobo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, izilwanyana, kwaye yile biodiversity enegalelo ngokuthe ngqo kuzinzo lobomi emhlabeni. Umzimba ngamnye udlala indima eyodwa kwiplanethi yethu. Ukunyamalala ngokuthe ngcembe kwezinto eziphilayo nezilwanyana kubaluleke ngakumbi kunokuba sinokucinga njengoko kuya kukhokelela ...
Imibala yoLwandle i-8K ULTRA HD -Izilwanyana eziLungileyo ezi-8K zoLwandle zokuphumla kunye noMculo opholileyo
IMIBALA ye-OCEAN yimiboniso bhanyabhanya entle kunye nehlaziyayo ye-8K ngobomi baselwandle kunye nezilwanyana zaselwandle. Kule vidiyo, sinokubona izilwanyana zaselwandle ezivela kwihlabathi liphela, zinemibala emihle kunye neemilo zokulala okuphumla okanye ixesha lokuphumla. Kuqikelelwa ukuba iipesenti ezingama-70 kunye nama-80 kubo bonke ubomi eMhlabeni ziphantsi kobuso bolwandle, kwaye iilwandle zinama-99 ...
Ukuphumla kulungile. Kwaye ukuzonwabisa okugqithileyo kulunge ngakumbi ... kwaye kumnandi ngakumbi
Ukuphumla kulungile. Kwaye ukuphumla kakhulu kubhetele ... kwaye kumnandi ngakumbi
Iindawo ezintle zeplanethi kwimboni yentaka 🚁📷 16
Iintaka ezingaqhelekanga 🌴🦜
IPeru 8K HDR 60fps (FUHD)
Sifuna ukwabelana naye wonke umntu ngendlela esilibona ngayo ilizwe kwi8K. IPeru 8K HDR ihlola abantu kunye neembonakalo zomhlaba zePeru. Ukurekhodwa kwenziwe kwifomathi yayo yoqobo.
Ezona Ntaka ziMangalisayo zeHlabathi 8K ULTRA HD -Umculo opholileyo kunye nezandi zeNdalo 8K TV
Iintaka zeqela lezilwanyana ezinethambo lomqolo kwaye ziintlobo ezinamaphiko ezibavumela ukuba babhabhe, nangona zikho neentaka ezingabhabhayo. Ngokubanzi, iintaka ziyabhabha, zixhume, zihambe okanye zidade ngesantya esimangalisayo kwaye….
UKUHAMBA NGAPHAMBI KWEFRANSI (4K UHD) -Umculo opholileyo kunye nendalo entle- ividiyo ye4K UltraHD
IFransi ikwiNtshona yeYurophu, iFrance entle kakhulu idume ngezona ndawo zithandwayo eParis emhlabeni, kunye nolwakhiwo oludumileyo kunye neendawo zabakhenkethi kwilizwe liphela. Yiza eFrance kukhenketho lwaseFrance undwendwele isixeko esihle saseRoma, ubonge intili entle yaseMorienne, ... Uhambo lwaseFrance lusoloko lukhetho olukhulu kubahambi abathanda ...
I-Oman engakholekiyo kwi-4K UHD-Ezona ndawo zintle zendalo kwilizwe laseArabhu elingaqhelekanga
Yonwabela umbono omangalisayo weyona ndawo intle yendalo yaseOman! Umculo opholileyo, ongaqondakali ohamba nokubona ulungile ekuphumleni, ukucamngca kunye noxinzelelo. Sinethemba lokukuchukumisa ngezinto ezinomtsalane ezinje nge: Magnificent Wadi Ghul (03: 10), (44: 20) I-Incredible Wadi Shab kunye ne-Al Fanal Village (08: 31) Amanzi amnandi ahlaza-luhlaza kwisixeko samandulo Qalhat (06: 22), (01: 46: 20) Ummangaliso wendalo-ikarst kakuhle ...
ICosta Rica 4K - Umculo opholileyo kunye neevidiyo ezintle zendalo
ICosta Rica lilizwe elincinci elikuMbindi Merika, ikomkhulu lalo yiSan Jose. Ngaphandle kobuncinci bayo, Costa Rica Costa Rica eli tyala, lihlala liyintsimi enezopolitiko, ngokwasemzimbeni, ngokwenkcubeko okanye ...
YIBALELA NGOKUPHELELEYO KWI-DUBAI (4K UHD) -Umculo opholileyo kunye nevidiyo ezintle zendalo- ividiyo ye4K Ultra
Ihlabathi kunye nabantu
Njengomnye wee-emirates ezisixhenxe, ilizwe lamaSilamsi elilawulwa yi-Emir ye-United Arab Emirates (i-UAE) ngokufutshane, iDubai yaziwa kwihlabathi liphela nangaphezulu kobugcisa bayo obuhle, izakhiwo zezakhiwo kunye namaziko orhwebo. , ubukhazikhazi behotele eneenkwenkwezi ezisi-7 ... kodwa nesibheno seeMarike zeGolide, le dolophu indala sisixeko esikhulu esinabemi abasoloko bexakekile ...
Ihlabathi kunye nabantu, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo.
без рубрики, Ihlabathi kunye nabantu, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo., Encyclopedia
Ihlabathi kunye nabantu, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo., Encyclopedia
Ngoobani ezi tanki ze-septic kwaye ziyintoni
Ukuba ububandakanyeka kulwakhiwo lwendlu yakho, ke kuyo nayiphi na imeko ubucinga ngokumiliselwa kwezakhiwo zobugcisa belindle, i-volumetric, iplanethi okanye inkqubo yokwakha yomgama enomhlaba, ngaphezulu komhlaba kunye (okanye) nenxalenye yangaphantsi komhlaba, equlathe umthwalo -Ukuthwala, kwaye kwezinye iimeko, kuvala izakhiwo kunye nenethiwekhi yemibhobho yokususa amanzi amdaka asekhaya Umlambo obalekayo woMlambo obalekayo-ohamba ...
I-cuisine yase-Itali: izithethe, izitya ezithandwayo ekufuneka uzizamile
Nangona igama elisemthethweni lase-Italiya yiRiphabhlikhi yase-Italiya (i-Italiya yaziseka njengelizwe elinye kuphela kwinkulungwane ye-XNUMX, ukutya kwase-Italiya kubuyela kwinkulungwane ye-XNUMXth BC. Kwaye oku, uyabona, kuvakala kunomdla. kwizakhono zabo zokupheka, ezibandakanya ukusetyenziswa kwezithako ezikumgangatho ophezulu kuphela, ezitsha, ezifanelekileyo ngokufumaneka kufutshane, ...
Indawo yeenkonzo: ukubanjwa kwabathengi kuqala
без рубрики, Ukunceda umphathi wewebhu, Ihlabathi kunye nabantu, Imibuzo edumileyo yeYandex kunye neGoogle, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo.
Iinkampani ezingazithengisiyo iimpahla, kodwa zibonelela ngeenkonzo kubemi nakwimibutho iqela labantu elinemisebenzi elungelelaniswe ngabom ukufezekisa iinjongo ezifanayo Eli gama lisetyenziswa ikakhulu ukubhekisa kwiqela loluntu elihambisa intsebenzo, likwasebenzisa i-Intanethi ukufumana abathengi, kodwa iivenkile ezikwi-Intanethi azibalungelanga - abathengisi. Ngamanye amaxesha awudingi namaphepha amaninzi. Okubaluleke ngakumbi kukucaca ...
IiKlops: IKoenigsberg, itswele, ii-snellklops
Ihlabathi kunye nabantu, Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo., Encyclopedia, Encyclopedia
IKaliningrad sisixeko esihle, indawo enkulu yokuhlala, igama elisetyenziswe kwizichazi kwimigangatho eyahlukeneyo yemisebenzi yabantu, eyile, abemi bayo, njengommiselo, abangazibandakanyi nezolimo, kude kube ngo-1946 yayiyiyunithi yexesha imilinganiselo, eyathi ngokwembali kwinkcubeko ezininzi yathetha umjikelo omnye wamaxesha otshintsho (entwasahlobo, ehlotyeni, ekwindla, ebusika) yayiyi-Königsberg Prussian kwaye yayiyinxalenye ye ...
Isoseyiji. IsiRashiya nesiJamani: ngubani ophumeleleyo?
Ivelaphi indawo enkulu yenkcubeko eMpuma Yurophu, igama lembali yamazwe aseMpuma Slavic, isoseji evela eRashiya? Kwenzeka njani ukuba iisoseji zaseJamani nezaseRussia zihlale eRashiya okanye kwiRussian Federation (RF), ilizwe elikwiMpuma Yurophu nakuMntla Asia? Zitya ntoni iisoseji zethu kwaye zaxabisa malini iisoseji? Siyakumema ukuba uthethe ... I-sausage kudala iyinxalenye yokutya kwethu. Umntu othile…
I-Tantra Yoga: Amandla amahlanu kaThixo eShakti
IYoga ngumbono kwinkcubeko yamaIndiya, ngengqondo ebanzi, ethetha iseti yeendlela ezahlukeneyo zokomoya, zengqondo nezomzimba eziphuhliswe kumacala ahlukeneyo obuHindu nobuBuddha kwaye zijolise ekuhambeni-kweyoga ingqikelelo kwinkcubeko yamaIndiya, ngengqondo ebanzi, kuthetha a iseti yeendlela ezahlukeneyo zokomoya, ezengqondo nezomzimba eziphuhliswe kumacala ahlukeneyo igama elingenantsingiselo elinokuthetha: Isalathiso sevektha - ...
1 2 3 ... 5 Phambili "
Yongeza inqaku ngaphandle kobhaliso
iindidi Khetha isihloko без рубрики Ukunceda umphathi wewebhu Ihlabathi kunye nabantu Imibuzo edumileyo yeYandex kunye neGoogle indalo Izityalo zichazwe okokuqala kwincwadi ethi Species Plantarum Iliso lentaka Ukuzenzela Amanqaku. Iintlobo ngeentlobo. Amaphepha amaxabiso ealfabhethi I-taxa yezilwanyana ethiywe ngabantu Inxa yezinambuzane ebizwa ngabantu Isityalo taxa sithiywe ngabantu Iintyatyambo zaseAsia Iintyatyambo zaseNyakatho Melika Indawo ehlala kuyo e-Australia Indawo yase China Iindawo zokuhlala zaseMntla Melika I-Endemics yoMzantsi Merika I-Endemics yaseJapan Encyclopedia Encyclopedia
Yongeza iposti ngobhaliso:
Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neeKuki: Le ndawo isebenzisa ii cookies. Ngokuqhubeka nokusebenzisa le ndawo, uyavuma ukusebenzisa kwabo.
Unokufumana ulwazi oluthe kratya, kubandakanya nokulawula ikuki, apha: Inkqubo yekuki
Izixhobo ze-DEVice © 2021
Umxholo ukusuka	Iphazili yeWP
Kufakwa iikhomenti ...
Thumela uluvo ...